Mpamory herinaratra: inona izy ireo, inona ary ny karazana | Green Renewable
Portillo Alemanina | 06/04/2022 12:00 | Toekarena an-trano
Un accumulator herinaratra Izy io dia fitaovana manaraka ny fitsipika mitovy amin'ny sela na bateria. Araka ny anarany dia singa iray afaka manangona sy mitahiry angovo, izay azo ampiasaina mandritra ny fotoana fohy na kely kokoa aorian'izay. Miankina amin'ny fomba fitahirizana sy fampiasana ny angovo izany. Midika izany fa tsy misy accumulators ihany, fa mety ho mafana ihany koa, izay mety ho elektrika accumulator hafanana, pneumatic, hydraulic na elektrika na mekanika accumulators rano.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny atao hoe accumulator elektrika, inona ny toetrany ary inona no anton'izany.
2 Karazana accumulator herinaratra
3 Inona no atao hoe accumulator elektrika?
4 Asa fikojakojana
Ny accumulator ny herinaratra dia fitaovana miasa toy ny sela na bateria. Izy io dia natao hitahirizana sy hanangona angovo azo ampiasaina any aoriana. Azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra na latsaka miankina amin'ny fomba fitahirizana sy ny fampiasana ny angovo voatahiry. Ataovy ao an-tsaina fa misy karazana bateria samihafa, ka ny iray na ny iray dia mety ilaina amin'ny toe-javatra tsirairay.
Ny tena asany dia ny mampandeha fitaovana iray hafa amin'ny alalan'ny angovo voatahiry, noho izany dia manana karazana fampiasana maro be izy. Ohatra, ao amin'ny tranon'ny orinasa, ny mahazatra indrindra dia ny fananana bateria lehibe izay mitahiry sy mizara herinaratra amin'ny alàlan'ny faritra samihafa.
Ny karazana accumulator herinaratra tsirairay dia miasa amin'ny fomba hafa miankina amin'ny karazana angovo hamadihana ny angovo elektrika voatahiry, fa samy manana ny fitoviana. Ny zava-misy dia ny accumulator dia mitahiry angovo ary avy eo manova azy ho karazana angovo hafa hampiasaina. Ohatra, ny mpanangona hafanana elektrika dia ampiasaina mba hanomezana fanafanana elektrika amin'ny fananana amin'ny alàlan'ny radiatera elektrika.
Karazana accumulator herinaratra
Misy karazany maromaro ny accumulator herinaratra. Andeha hojerentsika hoe inona izy ireo:
Photovoltaic accumulator: Manangona ny angovo avy amin’ny tara-masoandro ny “panneau solaire” iray ary mitahiry izany ao amin’ny fitoeran’entana natao ho azy. Ity angovo ity dia azo ampiasaina amin'ny fotoana rehetra na amin'ny andro na amin'ny alina nefa tsy mila miditra amin'ny tambajotra ivelany hanamafisana ny fametrahanao ara-barotra.
Electric heat accumulators: Izy ireo dia ampiasaina amin'ny fanamainana trano misy radiatera elektrika. Mampiasa herinaratra hamokatra hafanana ny mpanangom-bokatra mafana, izay zaraina amin'ny efitrano rehetra avy eo. Ny iray amin'ireo tombony miavaka indrindra dia ny hafanana haingana kokoa noho ny fitaovana hafa.
Electric accumulator: Heater izay mampiasa herinaratra mba hampiakatra ny hafanan'ny rano ao anaty siny. Ny rano mafana dia miditra amin'ny faritra fantson-drano ary tonga any amin'ny paompy rehetra ao an-trano.
Inona no atao hoe accumulator elektrika?
Ny tanjon'ny batteries fitehirizana herinaratra dia ny hampiakarana fitaovana na fitaovana hafa miaraka amin'ny angovo voatahiry, izay midika fa manana fiasa sy fampiasana betsaka izy ireo. Ny bateria kely kokoa dia afaka mitondra fitaovana kely toy ny finday. Saingy ny lehibe kokoa dia afaka mitantana fiara sy entana lehibe hafa.
Ao an-trano, isan-karazany koa ny fampiasana ny bateria. Amin'ity tranga ity, miresaka momba ny fitaovana lehibe natao hitehirizana sy fizarana herinaratra amin'ny alàlan'ny faritra samihafa ao an-trano isika.
Ny fiasan'ny bateria dia miankina indrindra amin'ny karazana azy. Ny tsirairay amin'izy ireo dia manaraka ny foto-keviny manokana, mifototra amin'ny karazana angovo izay hanovana ny angovo elektrika. Na izany aza, ankoatra ny asany, manaraka dingana vitsivitsy izy rehetra.
Ny fanalahidin'ny accumulator herinaratra dia ny fahaizany mitahiry angovo. Mitahiry azy io izy io mba hamadika azy ho karazana angovo hafa. Noho izany, ny herinaratra dia avadika ho angovo simika, izay tehirizina mandra-pahatongan'ny fotoana ilaina ary avy eo avadika ho angovo elektrika hampiasaina.
Raha maka ohatra amin'ity hetsika ity isika dia afaka manatona ny karazana accumulator mahazatra indrindra ao an-trano, ny accumulator hafanana elektrika. Noho izany dia mora kokoa ny mahatakatra ny fomba fiasan'ny bateria. Amin'ity tranga ity, ny radiatera elektrika dia matetika ampiasaina mba hanomezana hafanana elektrika ho an'ny trano.
Noho izany, Ny radiatera accumulator elektrika dia mampiasa ny angovo elektrônika voaangona mba hanafana ny ampahany amin'ny seramika na aluminium, ary avy eo dia mipaka amin’ny efitra rehetra amin’ny trano. Ny fitaovana dia afaka mitahiry hafanana, noho izany dia azo ampiasaina mandritra ny fotoana maharitra ny angovo. Ny fanalahidin'ny fahafantarana tsara hoe iza no bateria tsara indrindra ho an'ny orinasanao dia ny fahazoana ny tena tanjony.
Tsy fahita firy ny bateria mijanona tsy miasa, fa ireo fitaovana ireo dia tsy hadalana. Raha misy accumulator elektrika na karazana tsy fahombiazana hafa, ny zavatra voalohany hojerena dia ny mekanika ivelany amin'ny fivoahana hita maso. Na dia hita ao anatiny aza ny ankamaroan'ny tsy fahombiazana amin'ireo singa ireo. Ankoatra ny fivoahana anatiny, dia misy lesoka hafa mahazatra toy ny resistors tapaka na circuit simba.
Ireo lesoka rehetra ireo dia tena goavana tokoa ka ny fiantsoana teknisianina matihanina no hany hamongorana azy. Aza manandrana mampiasa tetika hanamboatra bateria vita an-trano, satria mety hampitombo ny lesoka ianao ary mety ho loza ny vokany.
Ireo fitaovana ireo dia azo atolotra na iza na iza. Ny zava-dehibe indrindra, ho an'ireo izay te hampitombo ny heriny isan'andro. Noho izany, ny bateria dia ampiasaina mba hanampiana ny tahan'ny fanavakavahana isan'ora. Ampiasao ny fotoanan'ny vidin'ny herinaratra ambany indrindra ho an'ny bateria hamenoana ny tahiriny. Mamoaka angovo voatahiry mandritra ny andro. Ny bateria dia singa manana tombony maro amin'ny fametrahana an-trano. Miankina amin'ny karazana tianao sy izay tianao hotratrarina amin'ny fampiasana azy io.
Na iza na iza, amin'ny trano rehetra, dia afaka mametraka azy ireo. Izany rehetra izany dia ahafahantsika mitsitsy angovo sy mampihena ny faktioran-jiro na entona amin’ny faran’ny volana araka ny fombantsika. Ohatra, raha manana fanafanana entona na menaka isika dia afaka mametraka fanafanana rano, na radiatera elektrika, dia afaka mampiasa herinaratra hanafana ny rano na ny radiatera, fa tsy mampiasa entona entona, ireo accumulators dia azo atao. Ny olona sasany dia mitazona azy ireo ao an-trano, fa ny hafa kosa manohitra izany, aleony mampiasa boiler entona na gazoala mba hanafana ny rano sy ny radiatera. Ny zava-drehetra dia mitombina tanteraka.
Na izany aza, raha manana fitaovana famokarana herinaratra avy amin'ny masoandro ao an-tranontsika isika dia asaina mametraka bateria photovoltaic. izany mamela antsika hitahiry angovo toy ny bateria, ary rehefa mamorona backup isika dia afaka mampiasa azy tsy misy masoandro, toy ny amin'ny alina. Na koa rehefa manana fanjifana be fitakiana isika ary tsy te hiankin-doha amin'ny tambazotra.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny atao hoe accumulator elektrika ianao ary inona no anton'izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » accumulator herinaratra